ေဟာင္ေကာင္ တြင္ ၂၀ ၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ေရာင္းခ် မည့္ Hozon Motors ၏ IPO - Pandaily
ခြောက် ကိုး ဘဏ္ Finance ာရေးတရုတ် လျှပ်စစ် ကား လုပ်ငန်း စတင် တဲ့ Hozon Auto ဟာ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် တတိယ နဲ့ စတုတ္ထ သုံးလပတ် မှာ ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း မှာ စာရင်းဝင် နိုင် ဖွယ် ရှိတယ်လို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ တွေဆီ ကနေ ကုမ္ပဏီက သိရှိ ခဲ့ရတယ်လို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။
ယခုအခါ Hozon Auto ကုမၸဏီသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မတိုင္မီ ယြမ္ ၂၂ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄၆ ဘီလ်ံ) ခန္႔ တန္ဖိုး ရွိေသာ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ မႈ အသစ္ကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤ ရန်ပုံ ငွေကို CATL, Qihoo 360, Shen Wanhongyuan နှင့် Aplus Capital တို့က ယွမ် ၈ ဘီလီယံကျော် ဖြင့် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ Hozon Auto သည် လာမည့် နှစ်တွင် IPO မတိုင်မီ နောက်ထပ် ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု နှစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Hozon Auto က “ ကုမၸဏီက ဆက္စပ္ သတင္း မရေသး ပါဘူး” ဟု ထို သတင္း အား တံု႔ျပန္ ခဲ့သည္။
သို့သော် အထက်တွင်ဖော်ပြ ခဲ့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများက Hozon AUTO ၏အဓိက စျေးကွက် သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရှိသော်လည်း အရှေ့တောင်အာရှ နှင့် အာဖရိက ဈေးကွက် များကို စူးစမ်း ရန် စတင် နေ ပြီဖြစ်သည်။ စျေးကွက် အခွင့်အလမ်း များအရ ဤ စျေးကွက် များကို အပြာရောင် သမုဒ္ဒရာ အဖြစ်သတ်မှတ် ဆဲဖြစ်သည်။ လာမည့် ၃-၅ နှစ်အတွင်း ကုမ္ပဏီ သည်အခြား နာမည်ကြီး ထုတ်လုပ်သူများ နှင့်တိုက်ရိုက် ယှဉ်ပြိုင်မှု ကိုရှောင်ရှား ခြင်းအားဖြင့် ဤ စျေးကွက် များမှ အကျိုးကျေးဇူး ရရှိနိုင်သည်။
အများပြည်သူ သိရှိ နိုင်သည့် အချက်အလက်များအရ Haozong Automobile သည်ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ယွမ် ၄ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ D1 ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ Qihoo 360 မှ ယွမ် ၂ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့ပြီး China Construction Bank International, CITIC Securities, Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) နှင့် Guangfa Venture Capital စသည့် လူသိများသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖွဲ့အစည်း များသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။ Hozon Auto ၏ နောက်ထပ် ရန်ပုံငွေ သည် လက်ရှိတွင် တိုးတက် နေသည်။ လောလောဆယ်Qihoo 360 သည် Huozong မော်တော်ယာဉ် တွင် နှစ်ကြိမ် ဆက်တိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သည်စုစုပေါင်း ယွမ် ၂. ၉ ဘီလီယံ ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:IPO မတိုင်မီ တရုတ် NEV ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်း သူ Hozon Auto သည်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ မြှင့် မည်
အောက်တိုဘာလတွင် Hozon သည်ကား အစီးရေ ၈၀၀၀ ကျော် တင်ပို့ ခဲ့ပြီး Xiaopeng နှင့် Lithium ကားများ ပြီးလျှင် ဒုတိယ နေရာတွင် ရှိပြီး NIO ထက်သာလွန်သည်။ နို ၀ င်ဘာလတွင် Hezong သည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကား အစီးရေ ၁၀၀၀၀ ကျော် တင်ပို့ ခဲ့ပြီး စွမ်းအင် နှင့် အာကာသ ကုမ္ပဏီ အသစ် များတွင် စတုတ္ထ နေရာတွင်ရှိသည်။
နို ၀ င်ဘာ လကုန် အထိ Haozong Automobile သည် ယခုနှစ်တွင် ယာဉ် အစီးရေ ၅၉, ၅ ၄၇ စီး ပို့ဆောင် ပေးခဲ့ပြီး စတင်တည်ထောင် ချိန် မှစ၍ စုစုပေါင်း ယာဉ် ၈၅, ၈ ၅၀ သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။